Iikholeji zaseTennessee: I-SAT Score Ukuthelekiswa kokungeniswa
I-SAT izikolo zokufakwa kwiikholeji eziphezulu zaseTennessee
Ukuqhathaniswa kwamacala ohlangothini lweCandelo leeKholeji zeeKholeji zeeKholeji ezili-11 eziphezulu
Funda ukuba izikolo ze-SAT ziyakwenza njani kwiikholeji eziphezulu zeTennessee okanye kwiiyunivesithi. Itheyibhile elandeleleneyo ngezantsi ibonisa amanqaku aphakathi kwama-50% abafundi ababhalisile. Ukuba amanqaku akho awela ngaphakathi okanye ngaphezulu kwezi zigaba, ujoliswe ekujoliswe kuyo kwelinye lale kholeji eziphezulu ezi-11 eTennessee .
Iikholeji eziphezulu zeTennessee zeSAT izikolo (phakathi kwama-50%)
KwiYunivesithi yaseFisk 420 540 400 470 - -
IYunivesithi yeLipscomb 500 638 490 630 - -
Maryville College 430 580 450 560 - -
College Milligan 460 590 500 570 - -
IRhodes College 600 700 580 680 - -
Sewanee: IYunivesithi yaseMzantsi - - - - - -
Tennessee Tech 460 590 500 600 - -
University University 530 660 490 640 - -
KwiYunivesithi yaseTennessee 520 620 520 630 - -
IYunivesithi yaseVanderbilt 700 790 720 800 - -
Qhubeka ukhumbule ukuba ama-25% abafundi ababhalisile baye bahlawula ngaphantsi kwabo babalwe. Khumbula kwakhona ukuba izikolo ze-SAT ziyingxenye enye yesicelo. Amagosa avunyelwe kule kholeji yaseTennessee aya kufuna ukufumana irekhodi eliqinileyo lemfundo , isicatshulwa esiphumeleleyo , imisebenzi yentshukumo ebalulekileyo kunye neencwadana ezilungileyo zokucebisa .
Funda Ngezinto ezininzi ezichaza 'iPascua'
Ibali le "Chespirito," iMexico uRoberto Gomez Bolanos
Iimpawu zeKrisimesi eziphefumlelweyo
Yintoni i-Aversion yobungozi obungapheliyo?
Imbali yeNegritude: I-Francophone Literary Movement
Ukuhlaziywa kweTranskin Bedliner